गुल्मीमा पनि भित्रियो पल्सर बाईकको नयाँ मोडल, के छन् बिशेषता ? यसो भन्छन् ब्यवसायी (अडियो) – Gulmiews
गुल्मीमा पनि भित्रियो पल्सर बाईकको नयाँ मोडल, के छन् बिशेषता ? यसो भन्छन् ब्यवसायी (अडियो)
No comments	मोटरसाईकल कम्पनीको दुनियाँमा बेग्लै पहिचान बोकेको बजाज कम्पनीले आज देखि देशैभर पल्सर मोटर साईकलका तिन बेग्ला बेग्लै मोडल वजारमा ल्याएको छ । वजाजले पल्सर २०० आरएस, पल्सर २०० एएस र पल्सर वन फिप्टी एएस मोडलको मोटरसाईकल वजारमा ल्याएको हो ।
गुल्मीको तम्घासमा पनि वजाज कम्पनीको अधिकृत विक्रेता रहेको सगरमाथा अटोमोवाईल प्रा.लि.ले एक समारोहका विच आज उक्त मोडलको पल्सर मोटरसाईकल वजारमा ल्याएको छ । त्यस प्रा.लि.का प्रवन्धक नारायण जिसीले भने ‘यि नयाँ मोडलका पल्सर मोटर साईकलहरुले प्रविधी र डिजाईनको पुनः परिभाषित गर्ने छ जसरी पहिलो पटक २००१ म वजारमा आएको पल्सरले गरेको थियो र ठुलो वजार ओगटेको थियो ।’ उनले पल्सरका यि नयाँ मोडलले ग्राहकहरुको पृथक र अदभुत किशिमको वाईक चलाउने चाहनालाई पुरा गर्ने अपेक्षा समेत गरे ।
प्रवन्धक जिसीले देशभर पल्सर मोटर साईकलले ५० प्रतिशत बजार लिएको र गुल्मीको हकमा ७० प्रतिशत बजार ओगटेको बताए । उनका अनुसार फोरवल र डिटिएसआई आधारित ईन्जिन, टाईमिङ्ग सिस्टम, एण्टीलक बे्रकिङ्ग सिस्टम जसले दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ र आरामदायी यात्रा गर्ने र टिकाउका लागि यसमा धेरै सुविधाहरु रहेका छन् । यि तिन वटा नयाँ मोडलका पल्सर मोटर साईकलले विशेषतः नयाँ पिढिलाई बढि आकर्षित गर्ने जिसीको भनाई छ । प्रवन्धक जिसीका अनुसार ति मोडलहरु मध्ये पल्सर २०० आरएसको मुल्य ३ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ । पल्सर २०० एएसको मुल्य २ लाख ८४ हजार ९ सय र पल्सर १५० एएस को मुल्य २ लाख ४९ हजार ९ सय रहेको छ ।
सगरमाथा अटोमोवाईल प्रा.लिले आज सदरमुकाममा तम्घासमा सार्वजानिक गरेका नयाँ मोडलका पल्सर मोटर साईकलहरु